Manofana serivisy any Israely
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Manofana serivisy any Israely
Septambra 25, 2013
Tany Israel dia nitatitra ny fampahalalam-baovao teo an-toerana fa hatramin'ny Alakamisy hariva, dia tapaka tanteraka ny serivisy fiaran-dalamby teo amin'ny Israel afovoany sy ny atsimo, taorian'ny lozam-pifamoivoizana iray nahavoarohirohy fiaran-dalamby
Tany Israel dia nitatitra ny fampahalalam-baovao teo an-toerana fa hatramin'ny Alakamisy hariva, ny serivisy fiaran-dalamby eo anelanelan'ny afovoany sy ny atsimon'i Isiraely dia mikorontana be, taorian'ny lozam-pifamoivoizana iray nahavoarohirohy ny lamasinina nitondra fitaovana mampidi-doza.
Manomboka amin'ny alarobia tolakandro ka hatramin'ny alakamisy hariva dia any ivelany avokoa ny fitateram-bahoaka rehetra, ho an'ny faran'ny fialantsasatra Sukkot miaraka amin'i Simchat Torah.
Manokana, ny serivisy Israel Railways eo anelanelan'ny tanàna atsimon'i Kiryat Gat sy Be'er Sheva dia mijanona aorian'ny fiatoan'ny alatsinainy lasa teo amin'ny fiaran-dalamby mitondra bromine sy potasioma.
Niala ny lalamby teo akaikin'i Kiryat Gat ny lamasinina. Tsy nisy namoaka ireo akora simika mampidi-doza ireo ary tsy nisy naratra.
Afaka mandeha lamasinina avy any Tel Aviv mankany Kiryat Gat ianao, saingy tsy misy serivisy ho an'i Be'er Sheva amin'izao fotoana izao aorian'ny loza. Ankoatr'izay, ny lamasinina mankany Kiryat Gat dia hiasa voafetra ao anatin'ny andro vitsivitsy: Ny fiaran-dalamby iray (manao fijanonana eo an-toerana) dia mandeha isan'ora avy any Tel Aviv ka hatrany Kiryat Gat mandritra ny ora fiasana mahazatra. Tsy misy serivisy mazava.
Ireo mpandeha te-handroso any atsimo kokoa avy eo dia tsy maintsy mandray aotobisy fitateram-bahoaka izay nomen'ny Israel Railways - ary voalaza fa miaina fitohanana sy fanemorana ihany koa ireo.
Ho fanampin'izay, ny fiaran-dalamby mandeha izay matetika miainga avy any Herzliya mankany Be'er Sheva dia naato ihany koa mandra-pahatongan'ny fampandrenesana fanampiny.
Araka ny tatitra dia enina kilometatra ny lalan'ny lamasinina no simba tao anatin'ilay lozam-pifamoivoizana ary nieritreritra ny hiasa mandritra ny fialantsasatra aza ny Israel Railways hanamboarana ny simba.